Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo eedeeyay dhiggiisa Puntland – Kalfadhi
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo eedeeyay dhiggiisa Puntland
Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir, oo wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi ayaa ka hadlay sababtii ay Galmudug uga maqneed Shirkii shalay ku soo dhamaaday magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland, kaas oo u dhaxeeyay Golayaasha xeer dejinta Qaranka ee heer federaal iyo heer Dowladda dhexe.
Cali Gacal Casir, Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in shirkaasi lagu casuumay balse markii dambe lagu soo wargeliyay in uusan Shirka imaan karin kadib amar ka soo baxay Guddoomiyaha baarlamaanka ee Maamulka Puntland.
“Shirka waa laygu casuumay laakiin markii dambe ayaa laygu wargeliyay in aan imaan karin waxaana diiday Guddoomiyaha baarlamaanka Puntalnd” ayuu yiri Cali Gacal Casir Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo wareysi siiyay Kalfadhi.
“Ma ogin sababta uu u diiday balse aniga waxaa igu wargeliyay Xoghaya Guud ee Golaha Shacabka C/kariin Xaaji Cabdi Buux, balse waa nasiib darro wayn” ayuu yiri Cali Gacal Casir oo la hadlay Kalfadhi.
Guddoomiyaha baarlamaanka ee Galmudug ayaa sheegay in arintaan ay sii hurin karto Khilaafka siyaasadeed ee ka jira Galmudug ayna maslaxad u aheyn geedi socodka Nabadeed ee Soomaaliya isagoo weerar afka ah ku qaaday dhiggiisa Puntland.
“Go’aanka uu qaatay Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland waa mid sii hurinaya arimaha ka taagan Galmudug ee maahan mid maslaxad keeni kara” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Guddoomiye Gacal.
“Waan u hambalyeeyay markii la doortay Guddoomiyaha baarlamaanka ma jirto aqoon kale oo aan u leeyahay, isagana ima yaqaano waa mida aan la yaabanahay sababta uu Galmudug ugu diiday Shirka” ayuu yiri isagoo la hadlayay Kalfadhi Cali Gacal Casir.
Ugu dambeyntii ayuu sheegay Cali Gacal Casir Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug in aysan Galmudug aqoonsan doonin wixii ka soo baxa Shirkii Shalay ku soo dhamaaday Garowe. “ma aqoonsan doono wixii ka soo baxay Shirka waayo anaga waan ka maqneen” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Cali Gacal Casir oo Wareysi gaar ah siiyay Xarunta Wararka baarlamaanka ee Kalfadhi.
Casho Sharaf xalay Garowe loogu sameeyay Xubnihii ka qaybgalay Shirkii Garowe ee Baarlamaanka
Xildhibaan Abwaan Cabdirashiid oo ku taliyay in la adkeeyo qodobada ciqaabta ee xeerka kufsiga Puntland